Maitiro ekugadzirisa keyboard kudonha pane iOS 11 zvishandiso | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa keyboard kudonha pane iOS 11 zvishandiso
Kubva pakauya iyo nyowani yekushandisa system iOS 11 kune edu maApple neAppad zvishandiso, keyboard glitches zvinogara zvichitaurwa nevashandisi vashoma.
Kubva nhasi, Apple yakatotanga matsva maviri matsva yeIOS 11, isina kana mumwe akagona kugadzirisa iyi keyboard lag. Sezvo vatinoshanda navo vakataura, iOS 11.0.2, yekupedzisira kugadzirisa kusvika nhasi, yatarisa pane zvimwe, sezviri pachena, zvakakomba zvakakundikana, ichisiya parutivi iyo lag inowanikwa mukhibhodi.
Kuona kuti Apple haisi kuita chero chinhu kugadzirisa iri dambudziko rinoramba riripo, sezvatinotaura, mumhando nhatu dzeIOS 11, inotevera tichagadzira mhinduro nhatu dzinogona kuitika izvo zvinogona kuita kuti khibhodi yako ive nekugadzikana kwekare. Sezvandinotaura, ivo «zvinogoneka»Mhinduro dzakabatsira vamwe vashandisi asi inogona kunge iri nyaya yekuti kunyangwe tichiita izvo zvatinotaura, iyo keyboard inoenderera ichine iyo diki lag.
1 Mhinduro dzekubvisa keyboard keyboard lag
Mhinduro dzekubvisa keyboard keyboard lag
Dzora fungidziro yekhibhodi. Iyo nyowani iOS 11 inoshanda sisitimu inoshandisa iyo njere yekufunga kufanotaura mazwi patinenge tichinyora nekudaro tichifambisa kukurumidza kwekunyora. Izvi zvinogoneka, pakati pevamwe, nekuda nyowani A11 Bionic chip, iyo inosanganisirwa muiyo nyowani iPhone 8 uye 8 Plus, pamwe neinotevera iPhone X. Ndosaka michina yakare, senge iPhone 6, 6S kana 7, kusava neiyo chip nyowani kunokonzeresa iyo nguva yekupindura yakareba, nekuti iyo tekinoroji inoenderera nekuishandisa asi ine chip isina simba shoma. Kana tikabvisa sarudzo «yekufungidzira keyboard»Kubva pane zvimiro zvekhibhodi, zvinokwanisika kuti isu tizoona mhinduro irinani kana isu toshandisa iyo keyboard.
Dzorerazve marongero eduramazwi. Kana iwe wakanyatso gadziridza kubva kuIOS 10 kuenda kuIOS 11 usina kuita yakachena kumisikidza, zvinokwanisika kuti ese mabhatibhodi ari kurovera, ndokuti, iyo iOS 11 keyboard zvine chekuita neIOS 10 inopa kumwe kusiana uko kunogona dzimwe nguva kunokonzera kuti ivo vasanganise uye vafanane. kukonzera iyo lag diki kana chero imwe mhosho. Kuti tiite izvi, tinokurudzira kuti, kubva kumagadzirirwo emidziyo, seta zvakare duramazwi. Nenzira iyi, isu tinongo chengeta iro razvino duramazwi pane yedu kifaa uye harizosanganisike nechero imwe.
Dzosera mudziyo. Sezvatakataura mune yapfuura poindi, zvine musoro kana isu tichivandudza iyo yekushandisa system kune imwe vhezheni, kubva iOS 10 kusvika iOS 11, zvinokurudzirwa zvikuru kuti ive gadziridza yakachenaIchabvisa mafaera ese kubva kune yekare yekushandisa system uye nekuisa iyo nyowani zvakachena. Kana iwe watove uchigadzirisa uye kwete nenzira iyi, tinokurudzira kuti iwe ugadzire kuisirwa fekitori Uye pamusoro pekugadzirisa iyi lag mubhokisi, iwe uchaona kuti yako iPhone kana iyo iPad inomhanya zvakanyanya kuwanda uye zvingangoita kuti kunyangwe mune yekuchengetera iwe unozoona kuti iwe unenge uine imwe nzvimbo yemahara.
Kiyi dzokorora. Iyi mhinduro yakanyanya kuomarara uye inopfuura mhinduro iri fomu ye chifukidzo lag kuitira kuti tirege kuzviona. Kana isu tikaenda kune ayo marongero ekhibhodi mukati mechikamu chekuwanika, imwe yesarudzo ndeye «Kiyi dzokorora«. Iyi sarudzo inotipa mukana wekugadzirisa iyo kiyi yekudzokorora nguva. Mhinduro yacho iri mukuderedza nguva ino uye kuitarisa kusvikira tazadzikisa nguva yaunoda. Haisi imwe nzira yakabwinyiswa asi, kana lag ikatinetsa zvakanyanya, tinogona kuishandisa kuyedza kuiviga.
Hadzisi mhinduro dzinoshamisa uye zvinogoneka kuti hapana imwe yadzo ichagadzirisa dambudziko iri nekhibhodi, asi tinokurudzira kuti uedze ivo nekuti nhasi Apple haina kuisa chero mhinduroZvichida nekuti haina kuwana iko kukanganisa kana nekuti huwandu hwevashandisi vane dambudziko iri ishoma kwazvo uye havafungi kuti dambudziko riri padanho rezvese.
Kana iwe uine chero mibvunzo pamwe nedzimwe mhinduro dzataurwa pamusoro apa, tinyorere mune zvakataurwa kuti tikwanise kukubatsira.
Sezvo ivo kuverenga mukati Applesfera
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Maitiro ekugadzirisa keyboard kudonha pane iOS 11 zvishandiso
Iyo inonyanya kukurudzirwa mune yangu, ingave yekuita yakachena kumisikidza, asi kunyangwe zvakadaro ndine nguva iyo iyo keyboard ine yakawanda LAG: /
MHORO VADikani…. BHUKU RIRI PABHODHI YEKABHODI YAKASIMBISWA PAKUDZORA ZVINODZIDZISWA UYE KUSHAYA KWENYANZVI KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA KWEMAZUVA AKAPFUURA KAKAITA KUTI NDIKUNDE KUTI NDIDZIDZE NEORIDZIDZO YEMAHARA 8… NEZVINONYANYA KUTI !!! MATANHO OKUWEDZERA. HANDI KUNZWA IYI SENSATION KUBVA PANGUI YANGU YEKUTANGA IPHONE.
Daniel Alvear akadaro
Iyo lag hafu yakagadziriswa chete kana iwe ukaisa yechitatu-bato keyboard, gboard inoita senge yakanyanya kunaka sarudzo yenguva, inokurudzirwa kwazvo.
Pindura kuna Daniel Alvear
Bob pinkman akadaro
Ndine iPad Air 2 ine beta yeIOS 11.1 uye yakanga iine lag yakati rebei. Yakagadziriswa kudzoreredza keyboard maduramazwi. Ndisati ndanyora mitsara bofu kusvika ndaziva mabhatani uye ndikavaratidza, ndiko kuti, ndakanyora chero zvazvaive, uye mushure mechipiri kana maviri iyo iPad yakatanga kunyora chete kwandakanga ndadzvanyidzira, asi kuisazve iyo keyboard inoshanda senguva dzose . Mune yangu nyaya yanga ichibatsira kwazvo!
Pindura kuna Bob pinkman
Muchiitiko changu ndine iPhone 6 ine vhezheni 11.02 uye iyo keyboard inogona kugadziriswa kana lag haina kuoneka nekumisazve duramazwi nekumisa yekufungidzira keyboard asi chiri chinhu chinofanirwa kugadziriswa
Apple inoshuma zvikanganiso mune mamwe masevhisi akadai seApp Store uye Mac App Store
Iyo iOS 11.1 beta inosvika yakatakurwa nema emojis matsva uye pano unogona kurodhaunira